Wararkii u danbeeyey ee dagaalkii aaga Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wararkii u danbeeyey ee dagaalkii aaga Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland
Wararkii u danbeeyey ee dagaalkii aaga Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland
Wararka u danbeeyey ee soo gaarey Horsed Media ayaa sheegaya, in dagaalkii subaxnimadii hore ee maanta ka bilowdey laba aag oo ku dhaw Tukaraq uu qaboobey hadda. Wararku waxay sheegayaan in roob xooggan uu aaga lagu dagaalamayey ka da’ay kaas oo hakiyey socdoka gawaarada gaashaaman.
Dagaalka ayaa ka bilowdey laba jiho oo ka baxsan laamiga. Ciidamada Puntland ayaa sheegtey in ay qabsadeen ilaa 6 gaari oo kuwa gaashaaman ah oo uu kamid yahay gaari Beebe ah, sida Horseed ka soo xigatey mid kamid ah saraakiisha Puntland oo aan oggolaan in magiciisa la xuso. Wararka qaar ayaa shegaya gawaarida dagaal ee Puntland qabsatey in ay aad u badan yihiin oo gaarayaan 11 gaari. Warar ayaa sheegaya in gawaarida qaarkeed ay galeen dhiiri kadib roobkii saakey halkaas ka da’ay.
Waraku waxay intaas ku darayaan in Somaliland taliskoodi weynaa ay ka durkiyeen tuulada Tukaraq oo iyada aan dagaalku ka dhicin, halkaas oo ay ku soo duleen 8 Janaayo 2018. Istraatiijiyadda dagaalkan ayaa ah mid ka duwan sidii markii hore la filaayey in uu ka dhacayo laamiga, waxaana dadka ka faaloodaa sheegayaan in Somaliland dagaalka dhanka miyiga ka dhacay ay dhibaato xooggan ku tahay halka markii hore la filaayey in waddada laamiga ah la isku heli doono.
Si kastaba khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ayaan weli la xaqiijin karin tirakoob rasmi ahna lagu hayn.